doubleTwist Ẹda dị ka oké music management ngwá ọrụ, na-enyere gị mmekọrịta iTunes music, video na foto gị Android ekwentị na mbadamba conveniently. Ọ bụ dakọtara na Windows PC na Mac, na Android version - doubleTwist AirSync arụ ọrụ nke ọma. Ị nwere ike na-aga ya ukara website ibudata gị chọrọ version. Wezụga ya, ọ na-enye gị ụzọ abụọ jikọọ. Otu bụ site na a eriri USB, ndị ọzọ bụ n'elu WiFi. Download doubleTwist inwe a na-agbalị >>
Otú ọ dị, ọ na-adịghị akwado Android 4.3 na mgbe e mesịrị mgbe ị jikọọ n'elu a UBS USB. Ọbụna na ọ bụ dakọtara na gị Android OS, ọ na-ada ada na-aghọta ya. Ọ bụ ezie na ị nwere ike jikọọ n'elu WiFi, ọ bụghị ihe free. Ọfọn, ma ọ bụrụ na ị ga-esi ike gwụrụ nke doubleTwist ma na-achọ ka onye ọzọ, ị ga-abịa nri ebe. Ebe a na-n'elu 5 doubleTwist uzo ozo maka PC na Mac.
1. Wondershare TunesGo maka Android Mac: 17.65M
Windows: 26.89M $ 24.95 / 1 Year
$39.95 / ndụ Site na eriri USB
2. SyncMate Mac: 48.9M $39.95 Site na eriri USB, WiFi, Bluetooth
Android: dịgasị na Android $9.99 Site na eriri USB, WiFi
Windows: 174M Free Site na eriri USB, WiFi
Wondershare TunesGo (Mac) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Win) bụ ike ọzọ ka doubleTwist Mac. Ọ nwere ike na-eme ihe doubleTwist nwere ike. Ọ na-enyere ka mmekọrịta iTunes ka Android, gam akporo na iTunes na Mac ka Android enweghị ihe ọ bụla hassle.
Mmekọrịta dum iTunes n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ họrọ music, listi ọkpụkpọ, pọdkastị, iTunes U-egosi na TV si iTunes ka Android.
Nyefee Android music, listi ọkpụkpọ na vidiyo na ndị ọzọ na-Mac / iTunes na 1 Pịa.
Dọrọ na dobe photos, music, listi ọkpụkpọ, fim, wdg si Mac / PC ka Android.
Idozi ID 3 na mkpado ma hichapụ oyiri songs na iTunes.
Dakọtara na Android 2.1 na elu.
Nkwado n'elu 2000 ngwaọrụ, dị ka Samsung, Sony, Google, Huawei, LG, HTC, Motorola, na ndị ọzọ.
SyncMate bụ ihe ọzọ na doubleTwist ọzọ maka Mac. Ọ nwere 3 ụzọ maka njikọ: site na eriri USB, WiFi, na Bluetooth. Ya-enye gị mmekọrịta SMS, kalenda, kọntaktị, oku, nchekwa, safari ibe edokọbara, iPhoto na iTunes n'etiti Mac na Android
Mmekọrịta SMS, na kọntaktị na kalenda si gam akporo ka Mac for free.
Mmekọrịta photos na nchekwa n'etiti akwado Android ngwaọrụ. (Ugwo)
Jikwaa SMS na-akpọ ihe mere eme. (Ugwo)
Ugwu gị gam akporo ngwaọrụ dị ka mpụga ike mbanye na-agagharị na faịlụ na ya. (Ugwo)
Mmekọrịta ibe edokọbara na-echetara na niile ngwaọrụ. (Ugwo)
Cheta na: Ya ọrụ interface adịghị mfe iji. Ọ na-achọ Mac OS X 10,8 na mgbe e mesịrị.
iSyncr bụ a fechaa mmekọrịta software. Dị ka doubleTwist, ọ nwere 3 nsụgharị maka PC, Mac na Android. Ị nwere ike mmekọrịta iTunes listi ọkpụkpọ na Android ngwaọrụ site na WiFi ma ọ bụ eriri USB. Otú ọ dị, ọ na-apụghị eji mgbe Samsung Kies arụnyere na kọmputa gị.
Samsung Kies na-freeware emepụta site Samsung Company. Ọ pụrụ nkwado ma weghachite ọdịnaya na gị Samsung ngwaọrụ, nyefee ma jikwaa music, video na foto gị Samsung ngwaọrụ. Ọ ọbụna na-ahapụ gị nweta nkwalite ndị femụwe. Otú ọ dị, ọ na-adịghị eme nke ọma na njikọ. Ọtụtụ ọrụ mkpesa banyere ya.
3 Ụzọ Iji jikọọ Android ka Mac
2 Ụzọ Nyefee iTuns Music ka HTC
Nzo 3 iSyncr Alternatives
2 Ụzọ Bugharịa Music si Mac ka Android
A Full Guide nyefee iTunes ka Android
Nzo 3 Altenatives ka SyncMate
3 Ụzọ Detuo iTunes Music ka Samsung
Nyefee iTunes Music ka Nexus 5/10/4/7
Mmekọrịta iTunes Music na Android
Mmekọrịta faịlụ site Mac ka Android
Super Ntụgharị Alternative: Nchikota zuru okè nke Video Ntụgharị, Video Edito
Alternative ka DDR Pen Drive Iweghachite: Wondershare Data Recovery
> Resource> Alternatives> Top 4 Alternatives ka doubleTwist maka Mac na PC